भाइटीकाको साइत ११:3७ बजे, टीका लगाउदा कुन दिशामा फर्किदा राम्रो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भाइटीकाको साइत ११:3७ बजे, टीका लगाउदा कुन दिशामा फर्किदा राम्रो ?
भाइटीकाको साइत ११:3७ बजे, टीका लगाउदा कुन दिशामा फर्किदा राम्रो ?
मंसिर १ गते, २०७७ - ०७:३९
काठमाडाैं । हिन्दुहरूकाे महान् चाड आज तिहारकाे विशेष दिन भाइटीकामा दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकअर्कालाई सप्तरंगी टीका लगाई मनाइँदै छ ।
धर्मग्रन्थहरूका अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन यमुनाले आफ्नो घरमा दाजु यमराजलाई बोलाएर सत्कारपूर्वक भोजन गराउनुभएको हो । त्यसैले पनि आजको दिनलाई यमद्वितीया भन्ने चलन छ ।
यमुनाको सत्कारबाट प्रसन्न भएका यमराजले यस्तो वर दिएका थिए । आजको दिन यमुनामा स्नान गरेर यमराजको पूजन गर्ने मानिसले यमलोक देख्नुपर्दैन ।
यस दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजकाे आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दूबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोगमा आफ्ना दिदी बहिनी र दाजुभाइको सुख-समृद्धि, अरोग्य एवं दीर्घायुको कामना गरिन्छ ।
भाइटीका पर्व दिदीभाइको पवित्र प्रेमको प्रतीक हो ।यो पर्व दिदीले भाइलाई र बहिनीले दाजुलाई अनि त्यसैगरी भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विशेष मानसम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने, मेवा-मिष्ठान आदि मनपर्ने कुरा ख्वाउने, दिदी बहिनीहरूलाई दान-दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दिने परम्परा छ।
आज भाइटीकाको साइत साेमबार मध्याह्न ११ः३७ मा उत्तम रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ ।
भाइटीका लगाइदिने पूर्व र लगाइमाग्ने पश्चिम फर्किएर बस्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । यसो गरेमा उत्तरमा रहेको चन्द्रमा दायाँ पर्नेछ । हरेक शुभकर्ममा चन्द्रमालाई अगाडि वा दायाँ पार्नुपर्ने शास्त्रीय नियम छ ।अहिले चन्द्रमा वृश्चिक राशीमा छन् । वृश्चिक राशीमा रहँदा चन्द्रमा उत्तर दिशामा हुन्छन् । त्यसैले टीका थाप्ने व्यक्ति सके उत्तर, नसके पश्चिम दिशा फर्किएर बस्नुपर्छ भनिएको पञ्चाङ्गकारहरु बताउँछन् ।
मंसिर १ गते, २०७७ - ०७:३९ मा प्रकाशित